Po tylu dowodach miłości… | Tralalala
razem z Arkiem i Kaśka na tancach umuwilismy sie ze ja i Kaśka bedziemy miały taki status ,a Arek sobie ustawi jako status na to odpowiedz … ale ja jestem inna bo tylko ja to ustawilam … trudno … no i troche miejsca duzo zajmuje … jak ty u mnie zreszta … dobra … wchodz na mojego blogs . .. papa!!!
E tam! Wcale głupio nie wyszło…
Czyli mnie też pozdrawiasz ;D? Dziiięki :D!!!!!
ależ odwiedzam Cię Agatko, nie smuć się już…:) Więc u mnie też wszystko ok, na rajdzie byłam ja i… Ola. Tylko. Normalnie rekord, pierwszy raz byłam na rajdzie, na którym były tylko dwie osoby. Nowe doświadczenie:) A więc pozdrawiam Ciebie, Martę (czyli laylę), Olkę (Tępolkę:) Kaśkę (biegunkę:), też cię lubię Kasiu! To paaaa!!!!!!!!!1
Ktoś ty jesteś…??czyz z 65??jeśli tak to extra,jakiś numerek gg by sie przydał…:Pmoze jest ale ja mam ślepaka
Hej!!!!! Jestem właśnie na informatyce i toczę bój z siedzącą tu obok Anią… ale i tak nikt nie wie o co chodzi! Ania K. o Tobie tu mowa! Ok, u mnie wszystko ok i pozdrawiam!!!!!!!! ps!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tzn. paaaaaaa1!!!!!!!!!1
Napisane przez Tępolka około 13 rok (lata) temu. Odpowiedz
Hej!Ja to przeczytałam…
My may do nauczenia się 256 czasowników z niemca w Partizipie II i Perfekcie =-=
Moja droga,Perfekt to jest Partizip II + forma osobowa sein/haben….
Napisane przez kasia:) około 13 rok (lata) temu. Odpowiedz
no jakas nowa notka by sie przydała z jakimiś zyczonkami wylacznie dla mnie:):) no i wpadaj na mojego bloga… a no i musze sie pochwalic ,ze dostałam dzis 5 z kossu 5i5zistorii i +z niemca (no i jutro bedzie ^ z pracy klasowej z matmy pozdro i dzienki za życzonka papaa ::*:(:*:*:*:*
Zpuisz jakis nowa notke … i dziekuje z mnie bromnilas … jak mi sie wydaje to przed Kasia… ale ona mowi ze to nie ona … dobra … wchodz na mojego bloga .. paa
no dobra nie musisz podawać numeru,ja ci podam swój gg:4586121.A publicznie na nacie nie powiem ci kim jestem dopiero jak się odezwiesz…:D
pozazdroscic… bo kiedy Ty bedziesz biwakowac ja bede w szkole
a niemiec to cool jezyk:)
… pozdrawiam ^__^
Haha! wpisuje Ci sie! Ta… co ja mam ci napisac? No tak…. chwila zastanowienia…. Fajnie, ze bylas na tym srebrnym cos tam…. cos jeszcze? Nie, chyba nie…. Paaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pozdro dla wszystkich! dla Marty, Olki i Kaski, no i…. Ciebie!
napisz wreszcie nowa note!!!!!!
Absolutnie zgadzam się z Kaśką – NAPISZ WRESZCIE COS NOWEGO!
A cos nowego bedzie w piatek lub sobote(mialam nie pisac komentarzy na swoim blogu, ale nie chce mi sie logowac na blog.pl :P)
Wiesz, też tak chciałam, ale się nie umiałam opanować… ja nie piszę za to w mojej księdze gości :P:P:P Jestem fajna, nie?:D
NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA!NOWA NOTKA! NOWA NOTKA! MY CHCEMY NOWEJ NOTKIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!